Efa may ny Rova : korontanina ihany koa ny samy Merina | NewsMada
Efa may ny Rova : korontanina ihany koa ny samy Merina
22 taona katroka androany ny nahamay ny Rovan’i Manjakamiadana. Mbola misitery ny nahatonga izany sy ny tompon’antoka tamin’ity loza tsy roa aman-tany ity. Etsy ankilan’izany, mikorontana na korontanina ny samy Merina.
Nanambara ny vondrona miaro ny hasina eto Imerina fa mitsipaka marindrano ny anarana “Andriambenimerina “, nofidin’ny fikambanan’andriana iray, ny 25 aogositra teo, mba hisolo tena ny Imerina enin-toko amin’ny fitondrana ara-drazana, manerana an’i Madagasikara. « Tsy manana « Andriambe » ny Merina hatreto », hoy ny fanambarana. Tsy nisy nahalala ny fisian’io fifidianana io ary tsy fantatra ny mombamomba io olona lasa Andriambenimerina io.
Nisy koa Fikambanan’andriana nanangana lapa, teny Mangabe, ao amin’ny distrika Antananarivo Atsimondrano ny 22 septambra 2017, mba ho famerenana ny hasin’Imerina. Nomarihin’ity fanambarana ity fa tsy isan’ireo tendrombohitra masina 12 eto Imerina i Mangabe ary ny vohitr’Ambohidrabiby no hasin’Imerina, araka ny tenin’ny Mpanjaka Andrianampoinimerina.
Tsy vitan’izany, nisy fitokanana “tranobe” tao Ankazomalaza, ao atsimo andrefan’Ambohimanga, ny Alakamisy 21 septambra 2017. « Marihina anefa fa ny fomba sy ny lovan-tsofina ary ireo boky tranainy teto Imerina, tsy milaza ny fisian’ny tranobe tamin’ny fanjakana merina », hoy fanambarana.
Volambita sy ny volon’omby…
Farany, nisy fankalazana ny Taom-baovao lohataona na Volambita teto Imerina, ny 22 Septambra 2017, namonoana omby teo Analakely. Nohamafisin’ity fanambarana ity fa maro ny fikambanan’andriana merina no tsy nandefa solontena tamin’io fankalazana io, noho ny lohataona ahatsiarovana ny faharavan’ny fanjakan’ny Mpanjaka Ranavalona III, ny 30 septambra 1895, sy ny fahamaizan’ny Lapa Manjakamiadana, ny 06 Novambra 1995.
Tetsy ankilan’izay, « niteraka resabe tokoa ity Volambita ity, noho ny lokon’io omby novonoina io, mainty na mazava loha aza. Tsy fanao sorona sy joro amin’ny faritr’Imerina, indrindra manoloana ny andriana, ny lokon’omby toa izany, fa omby volavita na omby malaza no fanao », hoy ny vondrona miaro ny hasina eto Imerina.
Melohin’ito farany, araka izany, ny « fanotana fady an’Imerina ary ny fanovana ny tenin’ny Mpanjaka Andrianampoinimerina”.